“Sayed baad ahayd Mohamedow Mawle soo diraye” Sanad-Guuradii Tobnaad Ee Kasoo Wareegtay Geeridii Aabihii Somaliland, By Eng. Mohamed Ali Muse – Araweelo News Network (Archive)
Marka hore waxaan salaan qadarin,sharaf iyo karaamaba leh u dirayaa dhammaan shacabka xariirta ah ee reer Somaliland iyo inta
maqaalkan akhrisataba.Waxaan dhammaantiin Allaha awoodda leh idiinka baryay aa , inuu idinka yeelo kuwii if iyo aakhiraba liibaana , cadaaladda u hiiliya , Qabyaaladda iyo dulmigana ka fogaada.
Marxuum Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal,Ilaahay naxariistii Janno Fardawsa ha ka waraabiye,wuxuu ahaa shaqsi aan weli soo marin taariikhda dhammaan dadka af Somaliga ku hadlla,magaciisana sharaf ,qadarrin iyo karaamo huwan yahay.Wuxuu ahaa Siyaasi ruug caddaa ah,si weynna looga qadariyo mandaqadda Gee ska Afrika iyo dhammaan caalamkaba. Marxuum Cigaal (AHUN),wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Somaliland,ee gacantiisa ku soo sexeexay xoriyaddii aynu ka qaadanay Dawladda Ingiriiska,26 June 19 60 kii.
1993 kii , ayaa Marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal , mar labaad Madaxweyne ka noqday Somaliland, waqtigaas oo Dalka iyo dadkuba ay ku sugnaayeen xaalad aad u adag,jihadaad u jeedsatana ay ka soo yeedhayso dhiillo colaadeed , amnni darro , kala danbayn la’aan ,geyigana dhammantii ay ka muuqato bur burkii , xasuuqii iyo dakharadii ay Daalimintii Huwantu iyo kaba qaadkoodiiba inoo geysteen. Marxuum Cig aal (AHUN), isagoo hawshaa baaxaddaa leh u muuqato, oo aan Dawlado iyo kaalmo shisheeye toona gac anta hoos dhigan, ayuu ku guuleystay inuu shacabkii boggooda burcad isku mariyo,walaaleeyo ,hannaan dawladnimo iyo kala danbeynna u yag leelo ,seeskana u qotamiyo. Geesi naga baxoo, Guul dhashuu ahaa iga dheh.
Inkastoo aan qalin,buug iyo website lagu qoro toona , aan lagu soo koobi karin,taariikhdiisa, waxtarkiisii iyo wax qabadkiisii , bal aan dhowr shay ka tilmaammo:
3 May ,2002, oo ahayd maalintii marxuum Cigaal ku geeriyooday Cusbitaal ku yaalla magaalada Pretoriya ee Dalka Koonfurt Afrika,waxay ahayd maalin madaw, murugo leh ,naxdin iyo dhiillana u soo hoyatay dhammaan inta jecel jiritaanka iyo Qaranimada Somaliland. Walaw ay adag tahay in qoraal lagu sifeeyo sida uu noqday ama ahaa dareenka Somalilandersku meel ay maalintaas joogeenbba , bal waxaan isku dayi doon aa inaan idinku maansheeyo Gabay baroor diiqa ah, oo uu maalintaa tiriyey Cali Adan Cawaale ,waxaanu yidhi :
Waataad sargooyada habboon saaaftay nabarkiiye
Suugaanta kuma koobi karo sumadahaagiiye
Geeridu waa xaq,waana hubaal in naf walbba ay maalinteeda dha dhamin doonto mawdka,waxaase xaqiiqo ah, biyo kama dhibcaan ah, in shaqsigii Dalkiisa iyo dadkiisa waxtar,wanaag iyo dhaxal loo aayo uga tagaa , in taariikhda ma guurtada ah lagu xardhi doono, magaciisuna aanu dhimanayn weligii , lana xasuusan doono , loona duceyn doono mar walbba.
Waxaan soo jeedinayaa , in marxuum Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal , Aabihii Jamhuuriyadda Somaliland,lagu maamuuso, lagu qadariyo , laguna sharfo , dhaxalkii iyo wanaaggaa faraha badan ee uu inooga tagay , ahna ta maanta Somaliland heerkaa ku soo gaadhay , kuna naaloonayso . Maanta oo bishu tahay 3 May , ahna sannad guuradii 10-aad, ee maalintii uu geeriyooday marxuum Cigaal, waa in loo aqoonsado maalin Qaran , oo shaqada laga nasto , loona duceeyo.
Waxaan ku soo geba-gebaynayaa qoraalkaygan kooban, Allahayaw adaa awood lehe ,waxaan kaa baryayaa in aad marxuumka danbi dhaaf u fidiso , qabriga u nuurto , u waasiciso , neecaw udgooniyo , ku siiso naruuro , janno Fardawsana ku abaal mariso, Aamiin , Aamiin, Aamiin.